Air Exchanger, Air Exchanger Ventilator, Air manazava Unit, Ventilator, kevitra ny hanampatra - Holtop
Square metatra PRODUCTION faladia
Naorina tamin'ny 2002, Holtop no mitarika mpanamboatra ao Shina amin'ny famokarana lehibe indrindra fototry ny hafanana sy ny rivotra sitrana angovo vokatra any Asia, nanarona mahery 70,000m2 faritra.
Units ny fahafaha-mamokatra
Holtop manorina rafitra taratasy misy kilema ny ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001 ary koa ny taratasy fanamarinana ny vokatra rafitra. Manana ny nankatoavin'ny pirenena enthalpy laboratoara, mafy R & D ekipa sy handova 30+ Patents.
Tsena anatiny Share
Holtop tompony ny fototra teknolojia ny hafanana sitrana sy mihazona No. 1 tsena anjara amin'ny fanarenana ara-barotra angovo ventilators isan-taona ao Shina amin'ny fitomboan'ny 40% +. Products dia naondrana ny 100+ firenena.
Nitarika ERV mpanamboatra
Holtop no No. 1 Manufacturer ny Heat & Energy Recovery rivotra Products any Shina, ary izao tontolo izao tompony mitarika fototra teknolojia ny hafanana sy ny angovo sitrana.
Manam-pahaizana Indoor AIR FAHASALAMANA
HVAC manam-pahaizana vahaolana
Manambatra ny Air manazava Units AHU
Compact Air manazava Units AHU
DX Coil Air manazava Units AHU
Industrial Air manazava Units AHU
Anaty baoritra rivotra madio manazava Units FAHU
Tampon-trano Air manazava Units AHU
Wall nitaingina Energy Recovery Ventilators
Mitsangana Energy Recovery Ventilators
Malina izay mahatsinjo Plate hafanana